History – Family Of Films
Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး
Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield (2017) သည် IMDb 6.8/10 CSFD 68% Googluse User 91% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Yang Lu ရိုက်ကူးထား၍ Shu Chen, Yang Lu တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Chen Chang, Mi Yang, Yi Zhang တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Drama, History ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. တရုတ်ပြည် မင် မင်းဆက်လက်ထက်တွင် လာဘ်စားမှုကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် လျှို့ဝှက် ရဲတစ်ဦးသည် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုကြီးတစ်ခုတွင် ကြားညပ်ကာ ...
Valkyrie (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး
Valkyrie (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး Valkyrie (2008) သည် IMDb 7.1 Rotten Tomaotes 62% Google User 83% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Bryan Singer ရိုက်ကူးထားပြီး Christopher McQuarrie, Nathan Alexander တို့ ဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ Tom Cruise, Bill Nighy, Carice van Houtenတို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Drama, History, Thriller ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားမို့ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ….. ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်း ဟစ်ထလာကို ဆန့်ကျင့်သောဂျာမန်လူငယ်အဖွဲ့ရဲ့ ၂၀ ဂျူလိုင်မှာ လုပ်ကြံရေးကြံစည်မှု နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများကို သမိုင်းနောက်ခံထားရိုက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးမို့ ခံစားကြည့်ရှုကြည့်လိုက်ကြပါခင်ဗျာ… Quality - 1080p.Bluray Subtitle - Myanmar (Hard Sub) Translators -Wai Linn Kyaw Encoder - Thet Paing Oo 1080p ...
Dunkirk 2017 မြန်မာစာတန်းထိုး
Dunkirk 2017 မြန်မာစာတန်းထိုး စစ်ကားကောင်းကြိုက်သူများအတွက် IMDB Rating 8.3/10 ရရှိထားတဲ့ 2017ထွက် စစ်ကားလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ One direction က Harry Styles လဲ ဒီကားမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ဒီကားလေးက ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကို အခြေတည်ထားပါတယ် မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ဘယ်ဂျီယံ၊ ဗြိတိသျှအင်ပါယာနဲ့ ပြင်သစ်တို့ကို ဂျာမန်စစ်တပ်တွေ ဝိုင်းရံထားပုံ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြားကနေ အသက်ရှင်လွတ်မြောက်ပြီး အမိမြေကို ပြန်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားပုံတွေကို စစ်ပွဲရဲ့ရသတွေအပြည့်နဲ့တင်ဆက်ထားတဲ့ ဒီကားလေးကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုဖို့ ဆန္ဒပြုရင်း.... Review By THZ Translated By THZ Encoded By Thet Paing Oo 720p HD 488.38 MB (openload) 720p HD 900.15 MB (openload)
Munich (2005) မြန်မာစာတန်းထိုး
Munich (2005) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 7.6/10 Rotten Tomatoes 77% Google User : 86% Genre: Drama, History, Thriller Run Time:2hours 44 mins Munich (2005) သည် IMDb 7.6 Rotten Tomatoes 77% Google User 86% ဒါရိုက်တာ Steven Spielberg က ရိုက်ကူးထား၍ Tony Kushner, Eric Roth တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားထားကာ သရုပ်ဆောင် Eric Bana, Daniel Craig, Marie-Josée Croze တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Drama, History, Thriller ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. Black September စစ်အနိဋ္ဌာရုံ တကယ့်အဖြစ်အပျက်များကို အခြေခံ၍ အဲ့ဒီနေ့ဖြစ်ပျက်လာတဲ့ ...
The Concubine (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး(18+)
The Concubine (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး(18+) Imdb Ratings : 6.1/10 Google User 79 % Genre: Drama, History, Romance Run Time : 1 hour 43 minutes The Concubine (2012) သည် IMDb 6.1 Google User 79 % ဒါရိုက်တာ Dae-seung Kim က ရိုက်ကူးထား၍ Yoon-Jung Hwang, Dae-seung Kim တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးထားကာ သရုပ်ဆောင် Yeo-jeong Jo, Dong-wook Kim, Min-jun Kim တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Drama, History, Romance ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. မှူးမတ်ကြီးတစ်ဦးရဲ့သမီး Hwa-Yeon သူမရဲ့ အချစ်စစ် အစေခံကောင်လေး Kwon-Yoo, ...
The Ghazi Attack မြန်မာစာတန်းထိုး
The Ghazi Attack မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb rating - 7.8/10 Rotten Tomatoes 67% Genre - Action Drama Histroy Running time - 1 h 56 mins The Ghazi Attack (2017) ဇာတ်ကားလေးသည် ဒါရိုက်တာ Sankalp Reddy ရိုက်ကူးကာ ဇာတ်လမ်း နဲ့ ဇာတ်ညွှန်း : Sankalp Reddy နဲ့ Niranjan Reddy တို့ရေသား၍ သရုပ်ဆောင် Rana Daggubati, Kay Kay Menon, Atul Kulkarni တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော IMDb 7.8 Rotten Tomatoes 71% ရထားသော Action, Drama, History ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားမို့ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ ပါကစ္စတန် ရေငုပ်သင်္ဘော Ghazi ...
Dunkirk (2017) မြန်​မာစာတန်းထိုး
Dunkirk (2017) မြန်​မာစာတန်းထိုး IMDb - 8.5/10 Rotten Tomatoes 93% Type - Action , Drama, History Time - 1h 46min Dunkirk (2017) ဇာတ်ကားသည် Christopher Nolan ရဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေးသားပြီး ဒါရိုက်တာလုပ်ရိုက်ကူးထားသော ဇာတ်ကားဖြစ်သလို သူရဲ့ ဂန္တဝင်မြောက်ဇာတ်ကားဖြစ်သလို ၂၀၁၇ ရဲ့အကောင်းဆုံးကား box office တွင် ထိပ်တန်းစာရင်းဝင်ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ကြည့်စေချင်လွန်းလို့ မအားတဲ့ကြားက ချစ်ခြင်းအားဖြင့် ပြန်ပေးလိုက်တာပါ…ဇာတ်ကားအရည်အသွေးကလည်း ကြည့်လို့အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် ဒီထက်ကြည်တာတွေ့ရင် ထပ်တင်ပေးပါ့မယ်… ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ဘယ်လဂျီယန် ဗြီတိသျှနဲ့ပြင်သစ်က မဟာမိတ်တပ်သားများသည် ဂျာမနီစစ်တပ်မှ ဝိုင်းထားခြင်းကို ခံထားရပြီး ထိုဝိုင်းထားခြင်းမှ ထိုးဖောက်စစ်ဆင်ရေးလုပ်ပြီး ဘယ်လို ထွက်ရပုံကို ရင်တစ်ထိတ်ထိတ် သည်းတစ်ဖိုဖို ရိုက်ချက်ကောင်းကောင်း နဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားလုံး ပျင်းချိန်မရဘဲ ကြည့်ရှုရပါလိမ့်မယ်လို့ ခံစားကြည့်လိုက်ကြပါဗျာ…. Review by : Win Kyaw ...
Memories of the Sword (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Memories of the Sword (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 6.3 Rotten Tomatoes 75% Action, Drama, History 2h Memories of the Sword (2015) ဇာတ်ကားလေးသည် IMDb 6.3 Rotten Tomatoes 75% ရထားသော Action, Drama, History ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားမို့ တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. အလယ်ခေတ်ကိုးရီးယားကာလတွင် ကောင်မငယ်လေးတစ်ဦးသည် သူမ၏ အမေကို သတ်ခဲ့သူ သစ္စာဖောက်တစ်ဦးကို လက်စားချေရန် ခရီးထွက်ခဲ့လေသည်…သို့သော် သစ္စာဖောက်ကို လက်စားမချေခင် ဂေါယိုထီးနန်းဆက်၏ တကယ့်အာဏာရှိသူတွေ စစ်သည်တွေ ထဲက တစ်ဦးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရလေသောအခါ ထိုသူကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါမည်လား သစ္စာဖောက်သူကို လက်စားချနိုင်မလား အမေ့အတွက် သွေးကြွေးဆပ်နိုင်မလား ဇာတ်လမ်းတွင် ဆက်လက်ခံစားကြည့်ရှုပေးကြပါလို့……. Reviewed by- Win Kyaw Thu Translated by Kyawswar.BBG Encoded by Win Kyaw Thu
Giovanni’s Island (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Giovanni's Island (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDB 7.4 Rotten Tomatoes 85 % Animation, Drama, History | 1 h 42 min| Giovanni's Island (2014) ဇာတ်ကားလေသည် IMDb 7.4 Rotten Tomatoes 85% ရထားသော Animation, Drama, History ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားမို့ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ…. အဖြစ်မှန်များကို အခြေခံ၍ တိုကျိုအခြေစိုက်ဆုရခဲတဲ့ အိုင်ဂျီ အန်နီးမေးရှင်းထုတ်လုပ်ရေးမှ ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ထားပြီး ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးတဲ့နောက် ကလေးများအကြား အပြန်အလှန် ယဉ်ကျေးမှု ဖလှယ်ကြည်သည် နွေးထွေးသည့် နှလုံးသားများပေါ်ပေါက်စေအောင်ရိုက်ကူးထားသည့် ဒရာမာဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ခံစားကြည့်ရှုပေးကြပါလို့…… Review by Win Kyaw Thu Translated by Ashley Zaw Encoded by Win Kyaw Thu Giovanni's Island (2014)
War of the Three Kingdoms မြန်မာစာတန်းထိုး
War of the Three Kingdoms မြန်မာစာတန်းထိုး အပိုင်း ၁ - ၂ -၃- ၄ - ၅- ၆-၇-၈-၉ IMDb 8.2 Drama, History |45 min | ဟန်မင်းဆက် ပျက်သုန်းပြီး... ဂျင်မင်းဆက် မပေါ်ခင် ကာလ အတွင်း တရုတ်ပြည်မှာ Wei, Shu နှင့် Wu ခေါ်သော ပြည်နယ်ကြီး ၃ ခု ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည့် ကာလကို Three Kingdoms ဟု အကြမ်း မှတ်ယူနိုင်သည်။ လူသားတို့၏ သမိုင်းကို ပြန်လှန်ကြည့်လျှင် စစ်ပွဲဆိုတာ မပါမဖြစ် အရာမဟုတ်ပါလား။စစ်ပွဲ တစ်ပွဲကို တိုက်ခိုက်ဖို့ ပြင်ဆင်နည်းများစွာတွေ၊ ရန်သူရဲ့ အနေအထားကို ခန့်မှန်းပြီး ဗျူဟာ ဆွဲတာတွေ၊ လှည့်စားတာတွေ၊ အာဏာကို တပ်မက်ပြီး ကျရှုံးသူတွေ၊ ဥာဏ်ပညာ၏ ဘုန်းတန်ခိုး ...
Osamu Tezuka’s Buddha: The Great Departure (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
IMDb 6.3ထိရထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားလေးဟာ ဂျပန်Anime movie versionဗုဒ္ဓဝင်ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ် မြတ်စွာဘုရားဘဝဖြစ်စဉ်ကိုရေးဆွဲထားတယ်ပြောပေမယ့် ဗုဒ္ဓစာပေကဇာတ်လမ်းကျောရိုးလောက်ပဲယူထားပါတယ် ကျနော်တို့သိတဲ့ဗုဒ္ဓဝင်ဇာတ်နဲ့လုံးဝကွဲထွက်နေပြီး စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကောင်များလည်းအများအပြားထည့်သွင်းထားတာကြောင့် ပျင်းရိဖွယ်မကောင်းပဲ စကြည့်ဖြစ်ရင်အဆုံးအထိမထတန်းကြည့်ဖြစ်မယ့်ကားလေးပါ ဂျပန်Animeတို့ရဲ့မူအတိုင်း ကြည့်ပြီးရင်လည်းရင်ထဲတသသဖြစ်အောင်ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ် ကျနော့်အပြောထက်ကိုယ်တိုင်ကြည့်တာကပိုကောင်းပါလိမ့်မယ် ဗုဒ္ဓစာပေလာနာမည်များကိုကူညီပြောပြပေးသော ကို Zaw Lynn Htoon ခေါ် ကိုမင်းကံစီအားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည် Translated and Encoded by Dr.Nyan Size….1GB Duration….1hr51min DOWNLOAD BUDDHA HD MOVIE LINK